ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »3တစ်ဦးကျောင်းသားသမဂ္ဂဘတ်ဂျက်အပေါ်ချိန်းတွေ့ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်များ
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ RBerteig သို့ cc
ဤသည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးရှိသမျှသောလောကီကျောင်းသားတွေအတွက်အပူတပြင်းအရေးနှင့်ရုန်းကန်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်အမျှသာအသည်းအသန်လိုအပ်အိမ်သာစက္ကူတတ်နိုင်ဒီအတိတ်အပတ်က, ငါ့အကော်ဖီစွဲလမ်းငါ့ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ခြိမ်းခြောက်. သေး, ငါသည်အစဉ်ဆက်မပြတ်ဖိန်းဓာတ်၏လိုအပ်ကြောင်းပတ်လည်မှာမရနိုင်သကဲ့သို့, ကျောင်းသားတွေကလည်းသူတို့ကိုချိုးဖျက်င်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး.
ကျောင်းသားတစ်ဦးဘတ်ဂျက်ပေါ်မှာနေထိုင်ရလွယ်ကူသည်မဟုတ်. သင်ကအချိန်ပိုင်းအလုပ်ရှိသည်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိဘများ '' ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရှိသည်ဘယ်သူကံကောင်းအနည်းငယ်၏တဦးတည်းဖြစ်၏ပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါကြောင့်အခုထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားင်. သောကြာနေ့ညပီဇာတွန်းလှန်ခြင်းပိုဆိုးတာကဖို့လုံလောက်တဲ့ခက်ခဲပေမယ်ဖြစ်ပါသည်, အားလုံးတက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်များတွင်အထင်အရှားယ်အခြားဒြပ်စင်တစ်ခုရှိပါတယ်; ချိန်းတွေ့.
သင့်ရဲ့ကျက်သရေနှင့်မယုံနိုင်စရာကောင်းရူပနေသော်လည်း, သင့်ရဲ့နေ့စွဲအထင်ကြီးဖို့ကများသောအားဖြင့်သင့်တချို့မုန့်စိမ်းကုန်ကျပါလိမ့်မယ်. သို့သော်, အလင်းသည်စျေးကြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာရှိပါတယ်. ဤသုံးပါးလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ဦးချိုးဖဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းနေစဉ်သင့်ရဲ့နေ့စွဲအထင်ကြီးကူညီပေးနိုင်တယ်ကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကံကောင်းတနေ့င်.
တကယ်နီးစပ်တူ ... အနီးကပ်အိမ်သို့ Stay
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ စတိဗ် Jurvetson သို့ cc
ကောလိပ်အဝေးကွင်းကနေသင့်ရဲ့နေရာဖြစ်သည်. တကယ်တော့, ဒါဟာသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့နေအိမ်ထက်ပိုပျော်စေမယ့်. ထိုကြောင့်သင်တို့ညာသင့်လက်ချောင်းထိပ်မှာအများအပြားအားသာချက်များနှင့်အလားအလာရက်စွဲအတွေးအခေါ်များရှိသည်.
အစားအစာထဲမှာတစ်ဦးကရုပ်ရှင်ညဉ့်အမိန့်. Netflix စာသားကောလိပ်ကျောင်းကလေးတွေအဘို့ပြင်ဆင်သောခဲ့သည်.
အတူတကွ Cook က (မိုက်ခရိုဝေ့ချက်ပြုတ်နေတုန်းပဲမှတ်!)
ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း Play, ကဒ်များကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်း
အတူတူနေတဲ့စောင်ခံတပ်ကိုတည်ဆောက်. လူတိုင်းသည်နှလုံးမှာကလေးတစ်ဦးရဲ့, ဒါကြောင့်မငြင်းလိုပါဘူး
သာ. artsy-fartsy စုံတွဲ, တစ်ဦးယာဉ်ပြုပါသို့မဟုတ်အတူတကွဆေးထိုးခြင်း
ကိုယ့်ရိုးရှင်းသောသောစကားပြောခြင်းနှင့် cuddling များသောအားဖြင့်အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ ဘီလ် & Vicky T က သို့ cc
သင်ကစာသင်ခန်းထဲမှာအရာအားလုံးမလေ့လာဘူး. ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်း၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတန်ဖိုးရှိနှင့်အလွန်အသုံးဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်သည်သင်၏ CV ပေါ်မှာချမထားနိုင်တောင်မှသင့်ကိုငွေနှင့် ပတ်သက်. စမတ်ဖြစ်ကူညီပေးပါမည်. ထိုင်ပါ, တစ်ဦးကလောင်အမည်နဲ့စက္ကူကိုထုတ်ရ (သင့်ရဲ့ Laptop ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖွယ်ရှိလှည့်) နှင့်သင်၏လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များခန့်မှန်း. ဒီအစားအစာကိုထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း, ဖျော်ဖြေရေး, လိုအပ်ချက်များ, ကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့ရက်စွဲများ. သင်မပါဘဲအသက်မရှင်နိုင်အရာကိုသာချဖို့ကြိုးစားပါ. နောက်တစ်ခု, အတူတကွ costys add နှင့်သင်တစ်လလျှင်သုံးဖြုန်းနိုင်မည်မျှတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသောစုစုပေါင်းရ. ယခုစိန်ခေါ်မှုကိုလာ; ဒီငွေပမာဏကိုမကူးဖို့ကြိုးစား, ပင်ဖြစ်နိုင်လျှင်လျော့နည်းဖြုန်း. ယခုတွင်သင်သည်စစ်မှန်သောရည်းစားဖြစ်နိုင်, ဆဲလုံးဝချိုးဖဲ့ခံစားရဥပဒေကြမ်းများအတွက်ပေးဆောင်နှင့်မ.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ dougwoods သို့ cc
သင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်သင့်သယံဇာတများဖြစ်သည်. ငါသည်တသစ်သားဝန်ထမ်းများနှင့်မုတ်ဆိတ်နှင့်အတူအေးမြဒဿနပညာရှင်ကဲ့သို့မြည်ပေမယ့်ငါမင့်. ကျောင်းသားများကိုသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်အများအပြားအားသာချက်များရှိသည်. သင်တစ်နှစ်ရဲ့အစမှာလေကတည်းကဖွင့်လှစ်ပြီမဟုတ်သူတွေကိုကူပွန်စာအုပ်တွေသိ? ကောင်းစွာ, သူတို့ရက်စွဲစိတ်ကူးများချွေတာပိုက်ဆံအပြည့်အဝထားရှိလျှက်ထိန်းသိမ်းထားရှိခဲ့သည်င် ... သော်လည်းလျှော့တက်တူးထိုးသူများသတိထားဖ​​ြစ်. အဲဒီမှာအဆုံးသတ်မပါဘူး. သင်ကျောင်းသို့သွားရာအရပ်နေပါစေ, ငါသည်သင်တို့ကိုများစွာစတိုးဆိုင်များအာမခံနိုင်, သင့်ရဲ့ပရိဝုဏ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကျောင်းသားအထူးလျှော့စျေးပတ်ပတ်လည်စားသောက်ဆိုင်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ. ဤအခွင့်အလမ်းများကိုဘမ်းဆီးနှင့်ကျောင်းအထောက်အပံ့များပေါ်တွင်ပိုက်ဆံချွေ, အစားအသောက်နှင့်ပိုပြီး. မရေမတွက်နိုင်သောသဘောတူညီမှုရှိပါတယ်, တစ်ခုတည်းကိုသာကျောင်းသားများအတွက်အပေးအယူပြုလုပ်ရန်နှင့် giveaways. တစ်ကူပွန်ပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားသည်ရှင်ဘုရင်သို့မဟုတ်ဖြစ်လာခြင်း၏ရှက်ခြင်းအရာတစ်ခုခုမဖြစ်.
ဤသုံးပါးလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတူ, သင်မတားဆီးနိုင်ပါလိမ့်မည်. ကိုယ်တော်သည်ကြီးမြတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့ချိန်းတွေ့ကမ္ဘာအောင်နိုင်နှင့်နေဆဲထိုသို့ပြသနိုင်ဖို့ကျော်ကျန်ရစ်ပိုက်ဆံရှိနိုင်ပါသည်. ဒါကြောင့်ထွက်မသွားနှင့်အချို့စိတ်နှလုံးကို capture နှင့်အချို့ပိုက်ဆံချွေ.